Tababarka Aqoonsiga RCGP - Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Tababarka Aqoonsiga ee RCGP
Abaalgudka Abaal-marinta ayaa la guddoonsiiyay heerka Aqoonsiga RCGP si loo gudbiyo aqoon-isweydaarsi hal maalin ah oo ay qireen kuliyadaha guud ee Boqortooyada Ingiriiska. Saameyntii Pornography Internet oo ku saabsan Caafimaadka Maskaxda iyo Jirka. Waxaan hadda u suuqgeynaynaa sidii Pornography iyo Dhibaatooyinka Galmada. Waxay bixisaa dhibco '7 CPD' oo ah nooca buuxa ee maalinta ah iyo dhibcaha 4 ee nooca nus-maalin. Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah koorso kasta ama waxaad bilaabi kartaa ballansashada adigoo gujinaya link this.
RCGP waa hay'ad xubin xirfadeed xubin ka ah isla markaana ilaalisa heerarka dhakhaatiirta qoyska ee ka shaqeeya kor u qaadista heer sare ee daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Dhakhtar Guud (GP) ahaan, joogtaynta aqoontaada iyo inaad xirfadahaaga u cusbooneysiiso iyadoo loo marayo Horumarinta Xirfadeed ee Sii-wadata (CPD) waa mas'uuliyad xirfadeed. GP-yada waxaa laga rabaa inay qaadaan 50 dhibco (saacado) oo ah Sii wadista Waxbarashada Xirfadeed sanad kasto oo qayb ka ah nidaamka dib u soo celinta xirfadeed.
The Mabaadii'da Muhiimka ah ee sii wadida Horumarka Xirfadlaha laga bilaabo Akademiyada Caafimaadka Kulliyadaha Caafimaadka ayaa bixiya talooyin ku saabsan sida xirfadlayaasha caafimaadku ay u gutaan CPD-ga. Koorsadani waxay noqon kartaa mid ku habboon in lagu helo dhibcooyinka CPD ee xubnaha ka tirsan kulliyadaha Caafimaadka ee soo socda:
Kuliyada Caafimaadka Galmada iyo Taranka
Kuliyada Boqortooyada ee Dhaqtarka iyo Dhakhaatiirta Dumarka
Kuliyada Boqortooyada ee Caafimaadka iyo Caafimaadka Carruurta
Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Edinburgh
Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Ireland
Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta London
Kuliyada Royal ee Dhakhaatiirta & Dhakhaatiirta qalliinka ee Glasgow
Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Maskaxda
Kuliyada Boqortooyada ee Qaliinka ee Edinburgh
Kuliyada Boqortooyada ee Qaliinka ee England
Kuliyada Boqortooyada ee Qaliinka ee Ireland
Kalkaaliyaha Daaweynta Mustaarka iyo Sharciga
Koorsadani waxay sidoo kale u furantahay qareennada, aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha kale. Jaaliyada Sharciga ee Scotland waxay u aqbalaan CPD iyaga oo hoos yimaada nidaamkooda is-weydaarsiga.
Shirkaddayada hal maalin waxay bixisaa saacadaha 6 ee barashada fool-ka-fool iyo saacad-akhris ah casharo horudhac ah, oo u gudbinaysa saacadaha 7 ee dhibcaha CPD.
Habka nus-maalin ee aqoon-is-weydaarsiga ayaa la heli karaa marka la codsado. Kooras buuxa ayaa sidoo kale loo gudbin karaa kalfadhiyo badhkeed oo ah maalmaha 2 ama kalfadhiyada 2-saac ee maalmaha 3.
Qodobada Koorsadu waxay si buuxda cadeyn u tahay waxayna bixisaa fursad wanaagsan oo loogu talagalay barashada barashada iyo wadahadalka. Waxay daboolaysaa:
Qeexitaannada arrimaha caafimaadka galmada ee ku xiran filimmada
Astaamaha maskaxda ee ku saabsan daroogada
Isticmaalka sawir-gacmeedka iyo saameynta ay leedahay
Saameynta caafimaadka jirka
Saameynta caafimaadka dhimirka - dadka waaweyn iyo qaangaarka
Qalabka wax lagu baro waxaa ka mid ah taageerada bixinta. Ka qaybgalayaashu waxay heli doonaan khayraadyo badan oo internetka ah, oo ay ku jiraan xiriirro badan oo ku saabsan waraaqaha cilmi-baarista ee aasaasiga ah.
Hadaad jeceshahay in hay'adda 'The Reward Foundation' ay gaarsiiso aqoon-isweydaarsigan howshaada, Kuliyadda Royal ama Gudiga Caafimaadka, fadlan hoos noogu soo qor warqad adigoo isticmaalaya foomka xiriirka bogga hoose. Waxaan khibrad u leenahay barida Mareykanka iyo Yurubta oo dhan.